Xaalka Qudus: Qorshaha Qarammada Midoobay ee lagu nasakhayo tillaabadii Trump – Kasmo Newspaper
Xaalka Qudus: Qorshaha Qarammada Midoobay ee lagu nasakhayo tillaabadii Trump
Updated - December 17, 2017 7:10 pm GMT
London (Kasmo), Golaha Ammaanka Qarammada Midoobay ayaa ka baaraandagaya soo saarista Qaraar (Resolution) ka dhigi kara waxba kama jiraan, go’aankii maqaamka Qudus ee Maraykanku ugu aqoonsaday Caasimadda Israel.
Qoraalka qabyada ah ee dalka Masar soo jeediyay, loona qaybiyay, Sabtisii 16kii Disembar 2017, 15ka xubnood ee Golaha Ammaanka, si gaar ah looguma xusayo Maraykanka iyo Trump toona.
Dibolomaasiyiinta uu khuseeyo ayaa caddeynaya in uu taageero buuxda heli doono, laakiin laga baqayo in uu la kulmo diidmada qayaxan “Veto” ee Washington; sida lagu wadana, Golaha Ammaanku waxay cod galin doonaan Qaraarka, laga bilaabo maalinta Isniinta oo 18ka Disembar ah.
Qaraar guulaysta wuxuu u baahanyanay taageerada 9 cod iyo isaga oo aan la kulmin diidmada qayaxan “Veto” ee mid ka mid ah 5ta xubnood ee joogtada ah, Maraykanka, France, Britain, Russia iyo China.
Ergada Maraykanka u fadhida New York wax faallooyin ah kama bixin codaynta Qaraarkan, laakiin Safiirkooda, Nikki Haley, ayaa horey u ammaantay tillaabadii Trump, iyada oo u aragta in ay tahay “middii saxda ahayd ee la qaadi lahaa”.
Qaraarakani wuxuu xaqiijin lahaa in go’aan iyo ficil kasta oo lagu sheeganayo wax ka-beddelka maqaamka iyo qaab-deegaanka dadka Qudus aanu lahayn qiime sharci ah, yahayna waxba kama jiraan. Waxaa kale oo Dawladaha oo idil loogu baaqayaa in ay ka joogsadaan ka-furashada Xarumo Dibolomaasi magaalada Qudus, sida waafaqsan Qaraarkii Golaha Ammaanka ee tirsigiisu yahay 478 ee 1980kii.
Qaraar kale oo Golaha Ammaanku soo saaray Disember 2016kii, wuxuu qorayay, iyada oo si gaar ah loola jeedo Qudus, in aan la aqoonsan doonin isbedel kasta oo lagu sameeyo Heshiisyadii 4tii Juun 1967kii, marka laga reebo kuwa ku imaada heshiis dhinacyada ku dhexmara wadahadal.
Qaraarkaas waxaa lagu gudbiyay 14 cod iyo Maamulkii Madaxweyne Barack Obama ee Maraykanka oo ka aamusay, taaas oo suuragalisay hirgalintiisa, codka qayaxan ee Maraykanka la’aantiis.